British Virgin Islands Yevashanyi Bhodhi: Kukanganisa kudiki kubva kuHurricane Dorian
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » British Virgin Islands Yevashanyi Bhodhi: Kukanganisa kudiki kubva kuHurricane Dorian
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • British Virgin Islands (BVI) Nhau dzichipaza • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Hurricane Dorian made landfall on the British Virgin Islands masikati aAugust 28, 2019 sedutu reChikamu 1.
Zvitsuwa zveBritish Virgin zvakagamuchira kukuvara kudiki kubva kuHurricane Dorian maererano nemishumo yekutanga nguva yadarika pakupfuura kwedutu neChitatu manheru Kuongorora kwakadzama kwekukuvara kuri kuitwa parizvino, zvisinei iyo ndima yatangazve mashandiro enguva dzose ebhizinesi kumabhangi, mahofisi ehurumende uye mamwe mabhizinesi mazhinji munzvimbo iyi mushure mekuongororwa kwenzvimbo mangwanani ano. Nhandare uye zviteshi zvengarava zvakavhurwazve, nekutakurwa kwemhepo uye kwegungwa kudzoka kusevhisi yakarongwa.
Terrance B. Lettsome International Airport yakavhurwazve na7: 30 mangwanani, nepo maferi epamba akatangazve sevhisi. Ese maFesheni epasi rose masevhisi akatangazve kubva kuTortola kuenda kuSt.Thomas, kusanganisira Red Hook Terminal.
Zvitsuwa zveBritish Virgin zvinoramba zvichiri munzvimbo yekugadzirira izvo zvino chave chinhanho chemwaka wedutu. Iyo ndima iri kushingairira kugovana zvidzoreso paDhipatimendi reNjodzi Management webhusaiti mukati megore rino dutu remwaka.